XRP Kalkuleylka internetka, gawaarida XRP. XRP qiimaha maanta ee suuqa sarrifka lacagaha.
XRP qiimaha Oo shilin Soomaali (SOS)
1 XRP (XRP) uyeelaysaan 141.37 Oo shilin Soomaali (SOS)
1 Oo shilin Soomaali (SOS) uyeelaysaan 0.007074 XRP (XRP)
Bedelka XRP gudaha Oo shilin Soomaali. Maanta XRP sicirka In Oo shilin Soomaali at 19/01/2020.
XRP qiimaha dollars (USD)
1 XRP (XRP) uyeelaysaan 0.24 dollars (USD)
1 dollar (USD) uyeelaysaan 4.09 XRP (XRP)
Bedelka XRP ee dollarka. Maanta XRP qiimaha dollarka 19/01/2020.
XRP qiimaha maanta 19/01/2020 - celcelis ahaan qiimaha marka loo eego natiijooyinka macaamil ganacsi XRP isweydaarsiga crypto maanta. Qiimaha XRP qiimaha waxaa la helaa sabab u ah macaamil kasta oo ka dhaca suuqa xorta ah ee isweydaarsiga. Falanqaynta waqtiga-dhabta ah ee XRP isbeddelada sicirka ayaa suurta gal ka dhigaya saadaalinta XRP sarrifka berri. Adeegso adeegga "XRP" qiimaha maanta 19/01/2020 "khadka bilaashka ah ee bartayada internetka.
XRP ee isweydaarsiga maanta waa miis soo koobaya dhammaan isweydaarsiga lacagta digital XRP) dhammaan is-weydaarsiga adduunka. Shaxda XRP miiska sarrifka maanta wuxuu ka kooban yahay sicirka sarrifka ugu wanaagsan, iibsiyada, iibinta XRP, macluumaadka ku saabsan lammaanaha ganacsiga lacagta digital iyo isweydaarsiga taas oo xaraashka ayaa la qabtay. XRP qiimaha gudaha Oo shilin Soomaali - celcelis ahaan qiimaha XRP marka loo eego lacagta Oo shilin Soomaali muddo gaaban. Liiska lammaaneyaasha ganacsiga ee aan ku bixinno miiska ganacsiga ee isdhaafsiga, waxaad ka heli kartaa macaamil toos ah XRP - Oo shilin Soomaali) oo muujinaya dhabta qiimaha macaamilyada Oo shilin Soomaali - XRP.
Qiimaha ugu fiican ee iibinta XRP kaas oo aad ka heli karto suuqa gaarka ah.
Qiimaha ugu fiican ee iibsashada XRP kaas oo aad ka heli karto suuqa gaarka ah.
XRP/BTC $ 0.699109 $ 0.641582 XRP ugu fiican Seeraar
XRP/USDT $ 0.678467 $ 0.656198 XRP ugu fiican Tether
XRP/ETH $ 0.689246 $ 0.65521 XRP ugu fiican Ethereum
XRP/INR $ 0.687014 $ 0.679403 XRP ugu fiican Qoondayn Hindiya
XRP/USD $ 0.69 $ 0.631985 XRP ugu fiican US dollar
XRP/EUR $ 0.682526 $ 0.65899 XRP ugu fiican Euro
XRP/LTC $ 0.671647 $ 0.671647 XRP ugu fiican Litecoin
XRP/KRW $ 0.69208 $ 0.654713 XRP ugu fiican Won South Korean
XRP/TRY $ 0.681723 $ 0.661093 XRP ugu fiican Boqalaal New Turkish
XRP/JPY $ 0.678722 $ 0.629692 XRP ugu fiican Yen
XRP/CKUSD $ 0.641 $ 0.641 XRP ugu fiican CK USD
XRP/CAD $ 0.649062 $ 0.649062 XRP ugu fiican Dollar Canadian
XRP/RUB $ 0.660961 $ 0.656993 XRP ugu fiican Ruble Ruush
XRP/AUD $ 0.666963 $ 0.666963 XRP ugu fiican Australiyaanka dollar
XRP/THB $ 0.670188 $ 0.670188 XRP ugu fiican Baht Thai
XRP/MXN $ 0.669519 $ 0.669519 XRP ugu fiican Peso Mexico
XRP/PLN $ 0.669538 $ 0.669538 XRP ugu fiican Zloty Polish
XRP/ZAR $ 0.702345 $ 0.702345 XRP ugu fiican Rand
XRP/CNY $ 0.682075 $ 0.645936 XRP ugu fiican yuan
XRP/XLM $ 0.668932 $ 0.668932 XRP ugu fiican Stellar Lumens
XRP/UAH $ 0.645741 $ 0.641582 XRP ugu fiican hryvnia
XRP/ETC $ 0.667603 $ 0.667603 XRP ugu fiican Ethereum Classic
XRP/QAU $ 0.684269 $ 0.684269 XRP ugu fiican Quantum
XRP/BRL $ 0.667104 $ 0.667104 XRP ugu fiican Dhab Brazil
XRP/BNB $ 0.675898 $ 0.675898 XRP ugu fiican Binance Coin
XRP/IDR $ 0.67814 $ 0.67814 XRP ugu fiican Rupiah Indonesian
XRP qiimaha doolarka (USD) - Qiimaha celceliska XRP maanta maanta doolarka Mareykanka. Qiimaha XRP qiimaha doolarku waa sicirka aasaaska u ah xisaabinta inta hartay XRP qiimaha iskutallaabyada. Qiimaha XRP qiimaha maanta 19/01/2020 - waxaa lagu qeexay xaddiga bedelka XRP ku dhuftay qiimaha hadda ee XRP. Qiimaha XRP marka la barbardhigo qiimaha XRP wuxuu ku kala duwan yahay lacagta is-weydaarsiga.
Qiimaha XRP qiimaha ilaa Oo shilin Soomaali waa qiimaha lagu qiyaasay XRP doolarka loo badalay Oo shilin Soomaali heerka isugeynta ah ee hadda taagan. The XRP to Oo shilin Soomaali celceliska qiimaha algorithm-ka waa mid aad u fudud. Wuxuu doortaa dhamaan lacagaha sarrifka ee lammaanaha ganacsiga maanta. Marka xigta, waxay xisaabisaa heerka sarrifka ee lacagta digital la doonayo ee ka dhanka ah doollar. Taas ka dibna waxay ku sii jirtaa oo keliya in loo beddelo sicirka illaa Oo shilin Soomaali. Waxa kale oo aad ka ogaan kartaa qiimaha XRP in Oo shilin Soomaali ee ku saabsan macaamilada tooska ah ee lacagtaan adigoo falanqeynaya jadwalka ganacsiga ee howlaheena ku jira. Qiimaha XRP doollarka Mareykanka waxaa lagu soo gartaa kaliya qiyaasta hadda jirta ama qiimaha XRP. Qaddarka lacagta digital ee hal macaamil ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan kara sicirka.
Waxaad isticmaali kartaa qayb la mid ah bogga, oo si gaar ah loogu talagalay tan: xisaabiyaha lacagta digital. Mid ka mid ah adeegyada wareejinta ee ugu caansan Xisaabiyaha XRP to qadka internet ka Oo shilin Soomaali waa adeega ugu caansan lacagaha kale. Waxay isla markiiba xisaabin doontaa xaddiga beddelka galay Oo shilin Soomaali ee soo iibsashada ama iibinta XRP qadarka aad gashay. XRP Beddelaad qadka ah - u rog waxkastoo lacagta digital ama lacag qaran 'XRP' isugeynta celceliska hada jira. Waxaan sidoo kale kuu sameynay qayb bilaash ah oo khadka tooska ah oo loogu beddelo crypto, oo lagu magacaabo beddelaad lacagta digital.